Mogadishu Journal » Wasiir Beyle oo komeer ku sameeyay xarumaha cusub ee Wasaaradda Maaliyadda+SAWIRRO
Wasiirka wasaaradda Maaliyadda Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Dr. Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa maanta kormeerkii ugu dambeeyay ku sameeyay xarumaha cusub ee Maaliyadda dalka oo dhawaan xarigga laga jari doono.
Xarumaha uu maanta Wasiir Beyle kormeeray waxaa ka mid ah Xarunta Hogaanka ilaalada Cashuuraha Barriga, dhismaha labaad ee W.Maaliyadda, Machadka barashada culuumta Maaliyadda iyo qaar ka mid ah xarumaha Cashuuraha ee Dagmooyinka gobolka Banaadir.
” Waxa aan u mahadcelinayaa Bangiga Aduunka iyo Bangiga Horumarinta Afrika oo ka qeyb qaatay dib-u-dhiska Xarumahaan,” ayuu yiri Wasiir Beyle.
Taageerada Hey’adaha Maaliyadda caalamka ee Soomaaliya waxa ay muujinaysaa Aaminaadda ay ku qabaan hannaanka iyo Maamulka Maaliyadda dalkeenna.
Wafdi uu hogaaminayo Madaxweyne Farmaajo oo u ambabaxay Dalka Jabuuti.